Coronavirus oo ku faafaya Hoteelada Magaalada Muqdisho | Dhacdo
Coronavirus oo ku faafaya Hoteelada Magaalada Muqdisho
Iyadoo Magaalada Muqdisho laga dareemay saamaynta xanuunka COVID-19 ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in xanuunka uu markaan ku faafayo hoteelada magaalada ku yaala.
Mid ka mid ah kalkaaliye-yaasha Isbitaal Martini ayaa Universaltv u sheegay inay badan tahay tirada dadka uu xanuunka soo ridanayo ee laga keeno hoteelada.
“Maalmahaanba waxaa naloo keenaayay dad uu soo ritay cudurka COVID-19, kuwaa oo saddex meelood oo meel la dhihi karo waxaa laga keenaa hoteelada.” Ayuu yiri Kalkaaliyaha oo codsaday inaaan magaciisa Warbaahinta loo adeegsan.
Isagoo faah faahinaya waxa ay dadkaasi isugu jiraan ayuu yiri “Waxay u badan yihiin qurbajoog, rag iyo dumarba leh, ganacsato, odayaal iyo shaqaalaha dowladda, dad caan oo ka mid ahna cudurka ayay u dhinteen, kuwa way ka bogsadeen, kuwo kalena hadda ayay isbitaalka u jiifaan.”
Su’aal ahayd mala dhihi karaa waxa uu COVID-19 ku faafayaa hoteelada ayuu ku jawaabay “Taas shaki kuma jiro, maxaa yeelay inta qof ee laga keeno xisaab malahan.”
Magaalada Muqdisho ayaa laga diiwaangeliyay tirada ugu badan ee dadka uu xanuunka soo ridanayo, marka loo eeggo magaalooyinka kale ee dalka.
Sidoo kale Muqdisho ayaa noqotay goobta keliya ee xaaladaha dhimashada laga xaqiijiyay, tan iyo markii uu xanuunka COVID-19 uu dalka dib ugu soo laba kacleeyay. Inta laga warqabo magaalooyinka kale ee dalka ayaan laga diiwaangelin xaalado dhimasho ah, bishan February.
Arrinta walaaca leh ayaa ah, iyadoo warbixinta maalinlaha ee Wasaaradda Caafimaadka aad ku arkeyso in ay yar yihiin dadka xanuunka ka bogsanaya.
Wararka ka imaanaya Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ayaa sheegaya in kooxo bastoolado ku hubeysan ay xalay magaaladaasi ku dileen nin...
Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay Safiirada Indonesia & Nigeria